ALPINE SLIDE BEDELKA GURYAHAAGA - WARARKA
Beeralayda iyo mulkiilayaasha guryuhu waxay jecel yihiin inay heystaan ​​riwaayad muuqaal ah oo ku yaala dhulkooda. Nasiib darro, riyadan quruxda badani waa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee dilka ah, sidaa daraadeed inta badan lama ogaan.
Laakiin dadka jecel dabiicadaha dabiiciga ah ee dhagaxyada dabiiciga ahi waa inayan ka dhicin oo ay ka daadiyaan rabitaanka lagu qurxiyo sawirkaaga - marka laga reebo ceelka alipine ee caanka ah waxaa jira jardiinooyin badan oo kale, oo aan yareyn, laakiin dhaqaale badan ayaa abuuraya. Ka fikir jaangooyo kale oo la isticmaalayo dhagax ku yaal naqshadda beerta
Rockery - halbeeg heer-hal ah leh dhir iyo dhagax
Marka la barbardhigo dhagaxyada xayawaanka ee alpine, oo aan ahayn heerar badan.
Xaaladdani waxay u oggolaanaysaa kaydka weyn ee abuuritaanka - ka dibna, uma baahnid inaad qalabaysatid gargaarka iyo saldhigga, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka sameysid biyo iyo dheecaan ciid ah iyo quruurux ah lakabka hoose.
Tani waxay ka dhigan tahay in ay qaadato wakhti yar iyo dadaal qalab iyo maaliyad si ay u iibsadaan qalabka..
Isla mar ahaantaana, dhagaxyada, iyada oo aan loo eegin xajmiga, waxay u muuqataa mid aad u qumman, xitaa xitaa qayba kooban ayaa u eegi doona stylish iyo asalka.
Si aad u sameysid faahfaahin buuxda, waa inaad sameysid habka ku haboon - dhejinta ama ka daadinta quraarada, laakiin waa inaadan si toos ah ugu dhajin alaabta beerta, haddii kale way adkaan doontaa in laga takhaluso cawska.
Ha ka baqin inaad ku riyootid markaad abuurayso dhagaxyo - xalal lama filaan ah iyo qurxiyo asal ah, sida xajmiga midabada leh ama jajabyo dhoobada ah, waxay ku siin doontaa qaab gaar ah oo gaar ah. Xalka guuleysta - waa isku-dhafka iyo dhagxaanta.
Beerta Rock - marka dhagaxyada ay "ku jiraan kaalin hoggaamineed"
Noocaan beerta dhagaxa ah waxaa lagu gartaa xaqiiqda ah in doorka ugu muhiimsan ee ka kooban halbeegyada ay ku ciyaaraan dhagaxyo - waaweyn, yar yar ama xitaa yar, iyo dhirta oo keliya ayaa dhammeystira. Qalabka beerta noocan oo kale ah wuxuu ku haboon yahay sawir leh dhul kasta.
Dhirta iyo geedaha aan loo isticmaalin si loo abuuro habdhaqan noocan oo kale ah, maadaama ay ku mashquulsan yihiin naftooda..
Diyaargarow habboon ayaa loo soo doortay geedi-socodka geed-gooyo, waxa ugu muhiimsan waa in aysan jirin dhirro badan oo ay dhammaantood si fiican u dhafan yihiin dhagaxyo.
Beerta Alpine - xoojiso quruxda dhirta
Marka la barbardhigo beerta dhagaxa, dhirta ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara beerta xayawaanka ah, waa kuwa leh inay qabtaan isha, iyo dhagaxyada, sida qurxinta, ayaa loogu talagalay inay xoogga saaraan quruxdooda.
Faa'iido aad u faa'iido leh waxay u eegi doontaa ka kooban - monosad oo loo qoondeeyay mid ka mid ah geedka. Xalka muuqaalka muuqaalka, marka laga reebo muuqaalka asalka ah, ayaa sidoo kale lagu kala soocaa fududeyntiisa qaabaynta. Jardiinooyinka Alpine oo ka samaysan heeter, daboolka daboolka, dhalinyarada ama caydha ayaa si weyn u muuqda.
Tallaabada Alpine - beerta derbiga dhagax
Talaabada Alpine waxaa loogu yeeraa habdhismo ka kooban derbi dhagax gaaban oo dhirta lagu beeray.
Marka la barbardhigo darbiga qoondaynta dabiiciga ah, soo degida looma samaynin si siman, laakiin diyaarad cireedka ah.
Marka la abuurayo shay, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qulqul si ay u buuxiso dheecaan iyo dhulka. Dhag dhagaxyada sare iyo meel dhirta.
Sheyga asalka ah ee asalka ah wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh inuu labadaba laftiisa iyo qayb ka mid ah jaranjarada beerta.
Isku daridda stony - riix shucuurkaaga
Haddii aad rabto in aad abuurto sariirta ubax ama sariirta ubax leh adigoo isticmaalaya dhagax kaas oo dabooli kara baahiyahaaga daawada, laakiin isla markaa "ha ku habooneyn" qaabka Alpine, ka dibna waxaad ku haboonaan doontaa halbeegga dhagaxa.
Sheygan waa nooc ka mid ah hagaajinta, halkaas oo wax walba ay ku kooban yihiin malahaaga, sidaas darteed waxaad ka abuuri kartaa gees kasta oo ka mid ah goobta, iyo xaalad kasta oo iftiin leh - labadaba meel qorrax leh, sidaas darteed hooska.
Waa suurtogal in la isticmaalo isla waqtigaas labada dhirta cagaaran, iyo dhirta, iyo duurka. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in dhammaan isbarbardhigga ay yihiin kuwo isku dhafan, qaybaha si fiican ayey isugu xiran yihiin.
Beer leh dhagax weyn oo qurux badan oo leh ubaxyo badan oo ubax iyo caws cagaaran. Marka lagu daro waxaad isticmaali kartaa waxyaabo kala duwan oo xiiso leh, sida muraayada midabada leh, dhagaxyada ama quraaradaha.
Beerta Stony - bixiso abaalmarinta quruxda dhagaxyada
Beerka dhagaxa ayaa labadaba lagu dhejin karaa goob xaaraan ah iyo boodbood - sheygan muuqaalkiisu wuxuu ku habboon yahay wax alla wixii gargaar ah.
Tan ugu muhiimsan, dhagxaanta iyo xuduudaha waa in ay ka adkaadaan dhirta lagu beeray qaabka mashiinnada meel fog oo ka fog midba midka kale.
Dhirta iyo geedaha aan loo isticmaalin halkan, sida waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka kooban yahay dhagaxyada, iyo diiradda ugu weyn ee ay ku quruxda..
Wanaagsan abuurista abuurka beerta dhagaxa ah iyo dhirta dabka dhulka hoostiisa ah, xaaladda ugu weyn - waa inay u ekaataa asalka, laakiin ka fiican - qumman.
Dhismaha dhagaxa dhagaxa ah ama "sariirta ubax la qaadi karo"
Mid ka mid ah asalka ugu caansan iyo waqti isku mid ah xulashada dhirta-guusha-guuleysta waa jardiinooyin weel leh. Faa'iidadooda ugu weyni waa awoodda ay u leedahay inay u dhaqaaqdo agagaarka.
Jardiinooyinka noocaan oo kale ah waxay qurxin karaan barafka, meel nasasho, ama xataa balakoonka guri dabaq ah. Iyo haddii uu bilawga maalmaha qaboobaha ah lagu daro guriga, waxay ku farxi doonaan isha illaa guga.
Caadi ahaan, jardiinooyinka dhagaxa leh waxay isticmaalaan dhirta kala duwan ee lagu qurxiyo, tusaale ahaan, kuwa dhoobada ah, laakiin sidoo kale waxaad isticmaali kartaa dhagaxyo leh god, ama xitaa qumbaha qumbaha, ama log iyo murgacasho.
Markaad dooranayso weelka, waxaa fiican in aad siisid waxyaabaha aad dabiiciga ah, balaastiguna uusan ku habboonayn, maaddaama muuqaalka "raqiis". Sidoo kale, si loo abuuro beerta caynkaas ah waxay u baahan tahay dhirta yaryar iyo dhagaxyada yaryar.
Maadaama shuruuda sharraxadu ay sare u kacdo shay yar, dhammaan qaybaha waa in lagu meeleeyaa ixtiraamka u dhigma iyo sharciyada ka kooban.
Sidaad horey u fahamtay, waxaa jira waxyaabo badan oo la kala dooran karo oo ah alpine slide, ugu dambeyntiina, caarad: ka hor intaadan bilaabin abuur wax kasta oo noocaan ah, marka hore horey u soo qaad qorshe ah walxaha mustaqbalka, kaas oo ku calaamadeyn doona meelaha dhagxaan iyo dhirta daadinta - taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad horey u xisaabiso tirada qalab iyo sidaas darteed iska ilaali iibsashada aan loo baahnayn.